Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan Lugood maktabadda goobta
Part1: Sida loo helo Lugood heesaha meesha ku PC ama Mac
Part2: Abuuridda Lugood maktabadda meel cusub oo ku saabsan PC ama Mac
Part3: Sida ay u guuraan maktabadda Lugood aad meel cusub
Marka hore, waano deg deg ah oo ku saabsan sida aad u heli Lugood maktabadda in waxa uu ku yaalaa on your computer PC ama Mac.
PC - goobta Maktabadda warbaahinta ee PC a kala duwan oo ku xidhan version Windows in aad leedahay on your computer. Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah xiriir la soo socda si toos ah waa in aad maktabadda Lugood ah.
Wixii Windows XP isticmaali: C: \_ Documents iyo Settings \_ username \_ Documents My \_ My Music \_ Lugood \_
Wixii Windows Vista isticmaali: C: \_ Users \_ Music \_ username \_ Lugood \_
Wixii Windows 7 Isticmaalka: C: \_ Users \_ username \_ My Music \_ Lugood \_
Wixii Windows 8 Isticmaalka: C: \_ Users \_ username \_ My Music \_ Lugood \_
Haddii aad hesho links buugga kor ku xusan aad eheeyn, waxaa jira hab kale, toobiye ah oo aad heli kartaa maktabadda Lugood ah, sida lagu soo sharxay in shaashadda hoose.
Mac - Helitaanka songs Lugood ee maktabadda on Mac ah ay tahay mid fudud tan iyo markii aad si fudud u raaci karaan waddada tooska ah sida hoos ku siiyo ama ay doortaan in ay helaan via Lugood sida la siiyaa shaashadda hoose.
Link ayaa si toos ah - / Users / username / Music / Lugood /
Hadda oo aad ogtahay sida loo helo heesaha Lugood ee maktabadda, haddii aad isticmaasho PC ama Mac, aad nuqul karo, ku biiro, isbedel ku sameeyo, oo la abuuro ringtone ah ama wax kasta oo kale oo ka mid ah heesaha oo aad jeceshahay.
Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha laga yaabaa in aad rabto in aad sameyso haddii aad sidoo kale, aniga oo kale, doonayaa in uu kaydiyo agabka Lugood aad meel aad doorato u gaar ah. Geedi socodka waa arrin la mid ah, oo labadoodaba PC iyo Mac. Ha ii sharaxo talaabooyinka ku lugta leh waa in fudud.
Wax First in la sameeyo waa in uu ka tago Lugood, haddii ay weli waxaa socda
Haddii aad isticmaasho Windows / PC - aad leedahay si aad ah 'Shift' muhiim ah oo ka 'Start' menu hoos u hay, raac jidka; All Programs> Lugood> Lugood
Haddii aad isticmaasho Mac - waa in aad furto Lugood in la bilaabo ka dibna si deg deg ah 'Xulashada' muhiim ah hoos u hay
Hadda awoodi doontid inaad si ay u arkaan fursad u 'Dooro' ama 'Abuur' maktabad cusub, arki Screenshot ku lifaaqan
Iyo, waxaa aad u tagto, waa in si sahlan loo dooran / abuuro maktabad cusub Lugood.
Hadda, aad horay u arag sida ay u fududahay in la abuuro maktabad cusub Lugood on your computer, PC ama Mac. Laakiin, sida aan aado maktabadda Lugood si aad u computer cusub dhammaantood? Waa hagaag, waxaad noqon doontaa faraxsan in ay ogaadaan in ay macquul tahay in ay u guuraan maktabadda Lugood si aad u computer cusub iyo in aad in aanay guuldarro ka soo baxay mid ka mid ah macluumaadka ku jira geeddi-socodka. Waxaan ku sharixi doonaa laba hab oo aad raaci kari weyday, a) habka soo jireenka ah ee si fudud kaga dayanayaan in computer cusub oo dhan xogta maktabadda Lugood ka folder default iyo b) aan jeclaa oo ugu fudud iyaga oo dhan, dhaqaaqin xogta maktabadda Lugood isticmaalaya TunesGo qalab ka Wondershare, si aad u computer cusub.
Ka hor inta aadan bilaabin habka, ha ilaawin in la abuuro gurmad ah maktabadda Lugood ama cusboonaysiiso gurmad jira sida aan ka dhigi lahaa kaliya socodka hawsha oo idil badan sahlan laakiin sidoo kale hubiyo ammaanka ee xogta aad maktabadda Lugood. Hadda, aad gurmad diyaar, aynu bilaabi habka laga tegaya maktabadda Lugood aad si aad u computer cusub.
Habka dhaqanka isticmaalaya drive dibadda
Talaabada 1: Download iyo rakibi nooca ugu dambeeya ee Lugood on your computer cusub iyo kii hore.
Talaabada 2: Hadda, waxay bilaabaan dayanayaan gurmad Lugood ka your computer jir ah - si taas loo sameeyo:
Wixii Mac - Tag> Home ka bar Finder menu ka dibna laba jibaar guji folder Music ah
Wixii Win XP - Tag \_ Documents iyo Settings \_ username \_ Documents My \_ My Music \_
Wixii Win Vista - Tag \_ Users \_ username Music \_ \_ Lugood
Wixii Win 7 & Win 8. Tag \_ Users \_ username \_ My Music \_ Lugood
Mac - From folder Music inay Desktop ah
PC - Laga soo bilaabo folder My Music inay Desktop ah
Talaabada 3: Hel drive dibadda on your computer cusub.
Wixii Mac- on Desktop ah
Wixii PC - in My Computer / Computer
Talaabada 4: Double guji drive dibadda si aad u furto
Talaabada 5: jiid folder Lugood ka drive dibadda si aad u folder Music ah (Mac) ama My Music folder (Windows) on your computer cusub. Kala iibsiga ayaa laga yaabaa inay qaadato muddo ah ku xiran tahay caddada aad leedahay.
Mac - From drive dibadda si folder Music ah
PC - From drive dibadda maktabadda Music ah
Waxaad ayaa haatan raalli ka your computer jir Lugood oo dhan si aad mid cusub.
Isticmaalka TunesGo ka Wondershare
Ka iPhone, iPad ama iPod wareejinta xogta aad dib Lugood aad.
Tafaasiil iyo ilaa nadiifiyaa maktabadda music aad ka mid ah.
Nidaameed iyo wareejiyo maktabadda Lugood si aad u qalab Android aad.
Download iyo record music ka websites online.
Talaabada 1: Download iyo rakibi TunesGo, links in ay xirmada rakibo buuxa, hoos waxaa ku. Marka aad soo bixi baakada, rakibi app on your computer, labada versions (Mac iyo PC) ayaa la heli karaa, si loo hubiyo in aad xulan version saxda ah ee computer.
Talaabada 2: Isku qalab Apple la your computer iyadoo la isticmaalayo cable USB iyo abuurtaan TunesGo. Hubi in maktabadda Lugood la synced la qalab Apple. Marka TunesGo ogaadaa qalab aad, waxay muujin doonaa dhammaan xogta ay ka mid yihiin muusiga, videos, sawiro, iwm, in ay suuqa kala hoose.
Talaabada 3: 3 iyo talaabadan ugu dambaysa ee aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan maktabadda Lugood si aad u computer cusub, si ay doortaan dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay sida heeso, videos, playlists iyo sawiro uu furmo suuqa ugu weyn oo guji "Dhoofinta in ay 'si aad u dhoofin iyaga oo aad Lugood maktabad cusub oo ku saabsan disk deegaanka adag of your computer cusub.
Top 5 Lugood Widgets ka Yahoo
> Resource > Lugood > Waxyaalahan oo dhan ayaa aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan Lugood maktabadda goobta